10-kii Tababare ee abid ugu fiicnaa horyaalka Premier League oo lagu dhawaaqay, xilli safka hore ay ka soo muuqdeen Ferguson, Wenger & Mourinho – Gool FM
(London) 16 Juun 2020. Tababareyaashii ugu wanaagsanaa horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa qiimayn lagu sameeyey, waxaana kaalinta koowaad kusoo baxay ruug-caddaagii Manchester United ee Sir Alex Ferguson oo muddo 21 sanadood ah oo uu joogay Old Trafford u qaaday 13 horyaal oo Premier League ah ka hor intii aanu hawlgabka noqonin sanadkii 2013.
Sir Alex ayaa Kooxda Manchester United sidoo kale kula guuleystay afar FA Cup, Saddex League Cup, labo Champions League iyo Koobka Kooxaha Adduunka, isaga ayaana loo doortay macallinkii ugu wanaagsanaa tobadkii tababare ee ugu fiicnaa abid horyaalka Premier League.
Waxa ay qiimeyntani ka soo bilaabatay sanadkii 1992-kii oo ah marka la bixiyey magaca Premier League, waxaana sameysay Jariirada Mirror, iyadoo uu kaalinta labaad ka soo muuqday macallinkii Arsenal 22-ka sanadood joogay ee Arsene Wenger.
Hoggaamiyaha reer France ayaa muddada uu joogay Arsenal, waxa uu Gunners ka dhigay mid ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan, iyadoo dhaqaale uu u abuuray, sidoo kalena u dhisay garoonka Emirates, waxaana uu kooxda la qaaday saddex horyaal oo Premier League iyo toddobo FA Cup.
Macallinka isku magacaabay Special One ee Jose Mourinho oo Chelsea la qaaday saddex Premier League, saddex League Cup iyo FA Cup ayaa ka soo muuqday kaalinta saddexaad ee qiimeyntan.
Tababaraha Kooxda Manchester City ee reer Spain Pep Guardiola ayaa qiimeyntan booska afaraad ka soo galay, waxaana shanta sare buuxiyey macallinka Kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 10-ka tababare ee abid ugu fiicnaa Premier League oo dhammaystiran:-